बजारमा पाइने कतिपय दादको औषधिले गरेको छैन काम, यसतर्फ दिनेकी ध्यान
बजारमा पाइने कतिपय दादको औषधिले गरेको छैन काम
सेप्टेम्बर 5, 2019 सेप्टेम्बर 5, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा, दाद
दाद नहुने शायद को होला ? हाम्रो क्लिनिकमा यस्ता समस्या लिएर आउने धेरै विरामी हामीले पायौं । दादको औषधि बजारमा थुप्रै छन् तर कसैले पनि काम गरेको छैन भन्दा हामीलाई कस्तो कस्तो लाग्छ । छाला रोग विशेषज्ञ काहाँ धाउदा-धाउदा पनि ठिक नभएर आएका थुप्रै गुनासाहरू हामीले बिरामीबाट पायौ ।
आखिर किन यस्तो भएको छ ? के सवै दादको औषधि रेजिस्टेण्ड भएकै हो वा औषधि नै वेठिक हो हाल बजारमा पाइएका Itraconazole Capsule , Terbinafine tablet, Fluconazole क्रमश: १०० मि.ग्राम २५० मि.ग्राम १५० मि.ग्रामका औषधि सवै दादको रोगमा कुनैपनि काम गरेको पाइएन । यहाँ हामीले कम्पनीको नाम भने उल्लेख गरेका छैनौं । यस्ता औषधि उपर छानबिन हुन आवश्यक छ ।
यस्ता औषधिले सेवन गर्दासम्म काम गर्ने तर सेवन गर्दा गर्दै पुन: शुरु हुने समस्या धेरैको गुनासो देखिन्छ । हामीले औषधि सेवन गर्ने तरिका फरक परेको त छैन भन्ने विषयमा धेरै जनाको रिपोर्ट हेरेका थियौँ तर कहि त्रुटी पाइएको थिएन । आज एलोपैथिक औषधिले दाद निको हुन सकेको छैन आखिर किन यस्तो भएको छ ?
औषधि सेवन गराउदा रोग निको नहुँदा डाक्टरहरूलाई समेत दिक्क भइरहेको छ । यस्ता औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीले अणु सहि छ वा छैन भन्ने कुरा एकिन गरेर मात्र औषधि उत्पाडन गर्दा ठिक हुने हाम्रो परामर्श छ । आज कतिपय औषधिले काम गरेको छैन ।
आज औषधि उत्पादन कम्पनीले रोग निको हुने खालको राम्रो औषधि उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउनु पर्नेमा हुनुपर्ने मात्रा भन्दा कम राखेको औषधि बजारमा पुगेको त छैन भन्ने कुरा हाल देखाएको छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखि दिनुभयो भने सबैको कल्याण निश्चित हुने देखिन्छ ।
यसै सिलसिलामा हाम्रो क्लिनिकमा कार्यरत डा. राजन पौडेलसंग हामीले यस बारेमा लामो छलफल सुरू गरेर एलोपैथिक औषधिको साटोमा आयुर्वेदिक र होम्योपैथीक औषधि केहि बिरामीलाई दिएर हेरेका थियौँ । एलोपैथिक औषधिको तुलनामा यसको राम्रो परिणाम आएको देखिन्छ । आज दादको उपचार गराउन पोखरा, भरतपुर ,काठमाडौंदेखि विरामी आएको देखिदा हामी आश्चर्य भएका छौं ।
← आयुर्वेदिक औषधि र नेपालको अवस्था
महाऔषधि रद्राक्षको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु →
डिसेम्बर 18, 2018 डिसेम्बर 18, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
सेप्टेम्बर 4, 2019 सेप्टेम्बर 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
फ्रेवुअरी 15, 2019 फ्रेवुअरी 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0